Qala Ukumaketha Okuzenzakalelayo kwenkambo yakho eku-inthanethi ukuze uzuze ukuthengisa okuningi kwe-B2B | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, i-2020 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, i-2020 UMichel Habiger
Enye yezindlela ezinenzuzo kakhulu yokwenza imali nge inkambo e-intanethi noma eCourse. Ukuthola ababhalisile kwi-newsletter yakho nokuguqula lokho kuholele ekuthengiseni, unganikela ngamahhala, bukhoma ama-webinars aku-inthanethi noma ukulanda mahhala ama-ebook, amakhasi amhlophe, noma ezinye izikhuthazi zokwenza amakhasimende we-B2B alungele ukuthenga.
Qala Inkambo Yakho Eku-inthanethi
Manje njengoba usucabange ngokuguqula ubuchwepheshe bakho bube inkambo enenzuzo online, ikulungele! Izifundo eziku-inthanethi zingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuhambisa amathemba ekuthengisweni okuphezulu. Ngokusebenzisa amathuluzi wokumaketha azenzakalelayo ukwenza lokhu kuthengisa, ungakhuphula izinga lokuguqulwa kwakho ngaphandle kokukhulisa umthwalo wakho wokusebenza.
Ukunquma ukuthi uzofundisani - Lapho ufundisa ikilasi, ngokwesibonelo ngethuluzi lokuzenzakalela lokumaketha, kuwumqondo omuhle ukufundisa okuthile okuthandayo noma onobungoti obuthile.
Nquma izithameli zakho eziqondiwe - Wonke umuntu ufuna lokho ibalazwe elilodwa lomgwaqo lokho kuzobasiza ukuthi bakhulise ibhizinisi labo baye ezingeni elilandelayo. Noma kungumuntu noma ibhizinisi, bafuna ukuthola izixazululo, izinzuzo, kanye nemiphumela abanikezwa yikhosi eku-inthanethi. Umphumela othenjiswe yinkambo yakho eku-inthanethi kufanele ucaciswe kahle ukuze ikhasimende lakho lenze isinqumo esicacile sokuthenga.
Zama ukudala igama lenkambo yakho eku-inthanethi ekhuluma ngemiphumela oyifunayo. Isibonelo, uma umphumela ungowamakhasimende akho ukukhuphula ukuguqulwa kokuthengisa. Isihloko sesifundo esifana nokuthi “Yenza imali yakho yokuqala engu- $ 5,000 ekuthengiseni esikhathini esingaphansi kwesonto” sizothola imiphumela engcono kakhulu kunokuthi “Ungakhuphula Kanjani Ukuthengisa Kwebhizinisi Lakho,” isibonelo.
Nquma Ubuningi Bakho - Ngabe ufuna ukunikela ngomkhiqizo wakho entshisakalweni ethile noma eqenjini labantu? Ngabe ikhasimende lakho elihle ngumuntu oqhuba ibhizinisi lakhe, nosomabhizinisi abaku-inthanethi noma abanye ochwepheshe? Manje yisikhathi sokuzibuza ukuthi hlobo luni lwekhasimende ofuna ukuliheha esifundweni sakho.
Dala uhlaka lwezihloko nezihloko ezinikeza inani kumthengi wakho ongaba khona - Eminye yemibono emihle kakhulu ye-inthanethi ingafaka:
Ukushintshela emsebenzini omusha
Ukuyisa umsebenzi wakho ezingeni elilandelayo
Ukwandisa umkhiqizo nobuciko kalula nangesikhathi esincane
Ukufunda ubuchwepheshe obusha obufana ne-AI nokukwazi ukubusebenzisa nokubusebenzisa ngokushesha nangempumelelo.
Ukuphepha okwandisiwe kwekhaya noma kwebhizinisi.
Ukwandisa amanani okuthengisa nokuguqula ngezinqubo noma izifanekiso zokuthengisa ezifakazelwe.
Zamanani - Ngamanani entengo, ungashintsha imithetho ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ungathola ukuthi inani eliphakeme lemininingwane ebalulekile oyinikezayo bese uthola imiphumela engcono. Abanye abathengi bazonikeza impendulo evumayo uma usetha isilinganiso esiphakeme kunalokho osinikeza okuncane. Ungahlala njalo bona ukuthi imakethe izothathani.
Uma ungayitholi impendulo oyifunayo, ungahlala ushintsha intengo yakho noma wenze izipesheli ezizodonsela abathengi kufaneli yokuthengisa. Isibonelo, ungahlinzeka ngokuqukethwe izinsuku ezingama-30 mahhala bese uhlinzeka ngokuqukethwe okwengeziwe noma ukunikezwa okukhethekile ngentengo oyibekayo.
Ukuguqula Zonke Izindlela Zenkambo Yakho eku-inthanethi
Ukuthengisa isifundo esiku-inthanethi kungaba yinselele. Ukwakha ukwethembana nokukhombisa ukuthi kungani ikhasimende elingahle likuthembe kubalulekile. Uma unikela ngento eyigugu efana ne-webinar yolwazi yamahhala, incwadi yezindaba ye-imeyili, i-eBook, noma umbiko, ofaka imininingwane engenzeka umthengi azoyithola ibalulekile kubo.
Ngesikhathi sokubhalisa kokuqala, unga ababhalisile bocwaningo ukuthola ukuthi yini abanentshisekelo kuyo kakhulu nokwenza ngezifiso konke okwenzekayo ngesikhathi nangemva kwesifundo. Kunamathuluzi amaningi wokulandelela we-imeyili angakwazi ukwenza imisebenzi efana nokugcina ithrekhi yoxhumana nabo be-imeyili. Ungakha ifomu lokubhalisa elisheshayo elibenza bakwazi ukufaka hhayi kuphela ikheli labo le-imeyili kepha negama labo nezindawo ezithile ezithakazelisayo.
Okwesimanje ithuluzi lokuzenzekelayo lokulandelela i-imeyili, ngokwesibonelo, ikuvumela ukuthi uthumele i-imeyili yokwamukela uqobo maqondana nezifundo zakho eziku-inthanethi neminikelo eyengeziwe ehlobene nomkhiqizo ukuze ikugcine uphambili futhi usezingqondweni zamakhasimende angaba khona. Ngokukhomba imakethe yakho, ungakha nokwethemba kuze kube sezingeni lokuthi amakhasimende wamanje nawesikhathi esidlule azokhipha igama ngalokho okunikezayo.
Amathuluzi okulandelela angasiza ukukhulula amaqembu akho okuthengisa nawokumaketha ukuthi aqhamuke nokuqukethwe okwengeziwe nemikhankaso futhi agxile kuzinhlelo zokuthengisa zangempela ezingabhekelwa ngabathengi abangaba khona nabamanje futhi bakhuphule ukuthengisa kwakho.
I-automation Engakhulisa Ibhizinisi Lakho futhi Yenyuse Ukuthengiswa Kwenkambo Okuku-inthanethi
Uhlu lwakho lwe-imeyili lungenye yezinto ezibaluleke kakhulu futhi ezinamandla onazo zokumaketha izifundo zakho eziku-inthanethi, ukuvala ukuthengisa, nokukhulisa ibhizinisi lakho. Yakha i-imeyili yakho list ngokwakha uzibuthe oholayo ozothola abathengi abangaba khona ukukunika ikheli labo le-imeyili.
Ngokubanika inani langempela kokuqukethwe kwakho kwamahhala kuzobenza babe sethubeni lokukunikeza imininingwane yabo ye-imeyili ukuze ubanikeze ngisho nangaphezulu kwalokho okuhlinzekayo futhi ubaholele kumngcele wokuthengisa nakwezinga eliphakeme lokuguqulwa ngu:
Izindaba zempumelelo zabanye abathenge izifundo zakho nemiphumela abayitholile ngokuyithatha.
Ukuchaza ngokusobala imiphumela yezifundo ongayilindela umthengi wakho lapho ethatha izifundo zakho eziku-inthanethi.
Amanani akhethekile, imicimbi, noma okunye ukunikezwa okungabakhuthaza ngokwengeziwe ekwenzeni isinqumo sokuthenga.
Mayelana nokulandela uFred
I-Follow Up Fred iyisandiso se-chrome esizokwenza ngokuzenzakalela ukuthumela i-imeyili yesikhumbuzo kothile ongakuphenduli. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuyivula bese uvumela u-Follow Up Fred ukuthi akwenzele wonke umsebenzi onzima futhi uma othile ekulandelela bese uphendula futhi ususondele esilinganisweni.
Bhalisela ukulandela uFred mahhala
Tags: ukumaketha kwe-imeyili okuzenzakalelayoLandelelalandela u-fredukulandelai-imeyili yokuthengisa
UMichel Habiger ungumbhali wokuqukethwe onolwazi olunzulu futhi unemakethe iminyaka engama-6. Njengamanje uchwepheshe omkhulu wezokukhangisa e LandelaUpFred.